Nhau - FFP2 mask
Iyo firita yezvinhu zveFFP2 mask inowanzo iine mana mairi Pane zvipenga zviviri zvemachira asina kurukwa, nhete yemachira akasaswa uye nhete yeanochinjiswa-neshinda yekotoni. Iyo shoma yekusefa mhedzisiro yeFFP1 inopfuura 80%. kusefa mhedzisiro ye FFP2 inopfuura 94% .Iyo shoma yekusefa mhedzisiro yeFFP3 inopfuura 97%.
Iyo yekufema bvunzo chiyero cheFFP2 yekudzivirira masiki yakasimba kwazvo. Iyo yekumisikidza kuramba bvunzo inoshandisa kuona kuyerera chiyero che95 L / min, uye kufema kwekudzivirira bvunzo kunoshandisa kuona kuyerera kuyerera kwe160 L / min. Iyo yakaoma kusefa kushanda pamwe nekufema kuramba bvunzo zviyero zvinoita FFP2 yekudzivirira mamask ane zvakakwirira zvinodiwa kune firita zvinhu.
FFP2 yekudzivirira masiki inogadzirwa nemhando yepamusoro-yekupedzisira zvinhu, izvo zvisina kungogadzikana chete asi zvakare zvine kunamira kwakanaka. Inogona kuchengetedza hutano hwevashandi nekusefa nekuvharira kupinda kwezvinhu zvinokuvadza senge guruva, mabhakitiriya, mavairasi uye mafuta ane mairi mumhepo.
Icho chinhu chinoshanduka uye chakasununguka microporous zvinhu, zvine hunhu hwekufema uye kusagadzikana. Panguva imwecheteyo, zvakare ine yekufema basa rekuona kunyaradzwa kwekupfeka.
Ichi chinhu chakakwikwidza-kuita zvinhu zvine yakanyanya tembiricha kuramba, ngura kuramba, kukwirira kuomarara uye simba.
Nekudaro, iyo FFP2 masiki inogona kutora maerosol anokuvadza, kusanganisira guruva, utsi, mhute, gasi rine chepfu uye mweya une chepfu, etc.